Ọnwụ ndị kachasị ọhụrụ na HTC bụ onye isi ala ya, Chialin Chang Akụkọ akụrụngwa
Oge ndị a abụghị oge dị mma maka ụlọ ọrụ Taiwanese nke yiri ka emikpu n'ime olulu miri emi. Ruo afọ ole na ole ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ enwebeghị otu ọkwa dị ka ndị ọzọ na ụdị ndị a na-ahụ maka ekwentị na nke ọtụtụ afọ, ha bụ ndị mbụ na ogo ụwa niile, mana ugbu a, ha emikpuola onwe ha na nsogbu nke ịdị adị.
Ruo ihe karịrị otu afọ nke ụlọ ọrụ ahụ kwụsịrị ọtụtụ isi ụlọ ọrụ ya na mba dị iche iche ma ugbu a ụlọ ọrụ ga-ahapụ n'enweghị onye nnọchi anya ya kachasị elu, Chialin Chang hapụrụ ụlọ ọrụ ahụ mgbe afọ isii gachara. Nke a bụ n'ihi mkpebi onwe onye, ​​mana ọ nweghị ihe ọ bụla akwadoro maka ọpụpụ ya.
Na Mobile World Congress dị ka ụbọchị kachasị nso maka ihe omume nke ụlọ ọrụ ahụ ga-aga, anyị ga-anwa ịnweta ozi gbasara nduzi nke ika ahụ maka afọ ole na ole sochirinụ na ọ bụ ezie na ihe niile HTC na-aga n'ihu ịlụ ọgụ iji nọrọ n'etiti ụlọ ọrụ ugbu a . Na-adịbeghị anya zuo mere Google na «Kwadoro site na HTC» nkewa na ahịa ndị ụlọ ọrụ ahụ rụpụtara ụdị Pixel, mee ka ọ dị ndụ, mana o doro anya na ọ bụ nwayọ nwayọ nwayọ.
Ọ bụ eziokwu na nkewa mebere nkewa na HTC Vive, ka na-ebute ụzọ n'ịlụ ọgụ maka akụkụ a nke ahịa yana ọ bụkwa eziokwu na n'oge ahụ enwere ike ịhụ ụfọdụ ngwa mkpanaka ekwentị, mana ọ nweghị ihe dịka na mbụ na HTC na-emetụ ọnwụ n'akụkụ a nke telephony. Ugbu a na ọpụpụ nke Chang, onye isi ala na onye isi ala, Cher Wang ga-achịkwa ụlọ ọrụ ahụ ruo mgbe achọtara onye ga-anọchi ya, ihe na-eyighịkwa ka ọ ga-ekwe omume na ọnọdụ nke akara ahụ ugbu a. O doro anya na n'ikpeazụ, ha ga-anọ dị ka ụlọ ọrụ mmepe AI na VR ịhapụ okwu nke smartphones, na-eche na ụgwọ ahụ gbakọtara HTC karịrị $ 100 nde na nkeji nke atọ nke 2017, Site na ọnụ ọgụgụ ndị a, o yighị ka ọ ga-anọ ogologo oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Ọnwụ ndị kachasị ọhụrụ na HTC bụ onye isi ala ya, Chialin Chang
Etu ị ga-esi nwetaghachi bọtịnụ "Lee onyonyo" na Google Chrome na Firefox